Ny fiantraikan'ny IQ amin'ny fahombiazan'ny akademika: hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny sekoly - Fampiofanana kognitive
Ianao izao: Home » Articles » Ny fiantraikan'ny IQ amin'ny fahombiazan'ny akademika: hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny sekoly
Ny fitsapana ho an'ny ambaratonga ara-tsaina izao dia niditra tao amin'ny fampiharana ara-pahasalamana tamin'ny taonan'ny fampandrosoana, indrindra raha ny fanombanana ny zaza na ny adolantsento dia misy ifandraisany amin'ny lafiny kognitika.
Ohatra iray mahazatra dia ny fikorontanan'ny fianarana manokana: ny fanombanana amin'ny diagnostika dia ahitana, ankoatry ny fepetra hafa, ny fanilihana ny fisian'ny tsy fahampiana ara-tsaina; ho an'ity tanjona ity, ny fanao dia mamantatra mialoha ny fampiasana fitsapana ho an'ny IQ (IQ), matetika multicomponentials toy ny WISC-IV. Ity fitsapana ity dia mifototra amin'ilay antsoina hoe maodely CHC handrefesana ny fahaizany misaina voafetra e lehibe.
Ny maodelin'ny CHC dia mahita mialoha ireo sosona hierarchical 3: eo an-tampony dia misy ny g factor, ilay azontsika resahina rehefa miresaka momba ny faharanitan-tsain'ny olona manerantany isika, ilay azo inoana fa tokony ho vokatry ny fandrefesana ny QI; amin'ny ambaratonga antonony dia tokony hisy singa tsy dia lehibe fa mbola malalaka (ohatra, ny faharanitan-tsaina, aretin-tsaina isam-bolana, L 'fianarana ary ny fahitana maso); amin'ny ambaratonga ambany indrindra dia tokony hisy fahaizana manokana kokoa (oh: scanner spatial, coding fonetika).
Ny WISC-IV, toy ny fanandramana hafa, dia mifantoka indrindra amin'ireo sosona roa avo indrindra: ny g factor (noho izany ny IQ) sy ireo antony lehibe kokoa amin'ny sosona faharoa (ohatra, ny fahatakarana am-bavaizany fanjohian-kevitra momba ny fahitana, la fitadidiana miasa ary ny hafainganam-pandeha).
Na izany aza, amin'ny tranga maro dia toa tsy azo adika ny IQ noho ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny isa isan-karazany azo ao anatin'ny WISC-IV; ity no tranga aretin-tsaina manokana (SLD): raha ny tombatombana sasany, amin'ny 50% dia hiseho ny mombamomba azy tsy fitoviana izay mahatonga ny IQ ho isa tsy misy dikany. Amin'izany toe-javatra izany, ny psikology izay manao an'io karazana fanombanana io dia mirona amin'ny fijerena bebe kokoa ireo zava-misy amin'ny sosona faharoa, mamakafaka ireo tanjaka sy fahalemena.
Amin'ity lahateny ity dia matetika no tsy raharahina ny lafin-javatra sasany:
Ohatrinona ny ambaratonga ara-tsaina (QI) dia manerantany mifandray amin'ny olana ara-pianarana?
Ohatrinona aho lafin-javatra ny sosona faharoa, izay mazàna refesina amin'ny fitsapana IQ misy singa marobe, dia mpilaza mialoha ny zava-bitan'ny akademika?
Tamin'ny taona 2018, Zaboski ary ny mpiara-miasa aminy dia nanandrana namaly an'ity fanontaniana ity tamin'ny famerenana ny fikarohana navoaka momba an'io lohahevitra io nanomboka ny taona 1988 ka hatramin'ny 2015. Ny fomba manokana dia nijery ireo fanadihadiana izay nanombanana ny ambaratonga ara-pahalalana tamin'ny mizana multicomponential izy ireo ka ny IQ sy ny hafa ny anton-javatra dia mifandraika amin'ny fianarana any an-tsekoly. Manokana, ho fanampin'ny QI, voafantina ny fikarohana izay nojerena fanjohian-kevitra, fampahalalana ankapobeny (izay azontsika antsoina koa hoe aretin-tsaina isam-bolana), fahatsiarovana maharitra, fanodinana sary, fanodinana auditory, fahatsiarovana fotoana fohy, hafainganam-pandeha.
Inona no hitan'ny mpikaroka?
Ny fahaizana manitatra indrindra dia afaka manazava latsaky ny 10% amin'ny zava-bitan'ny akademika e tsy mihoatra ny 20%, na inona na inona taona heverina (mandritra ny fotoana maharitra 6 ka hatramin'ny 19 taona). kosa, ny IQ dia hanazava ny salanisa 54% amin'ny zava-bitan'ny akademika (manomboka amin'ny 41% farafahakeliny ho an'ny famakiana amin'ny taona 6-8, hatramin'ny 60% farafahakeliny ho an'ny fahaiza-manao matematika fototra, indray amin'ny taona 6-8).
Anisan'ireo fahaizana niitatra, nyfampahalalana ankapobeny toa izy io no iray mifandray akaiky indrindra amin'ny fianarana any an-tsekoly sasany, indrindra amin'ny fahaizana mamaky teny sy ny fahatakarana lahatsoratra; amin'ny tranga roa dia ny 20% no hazavaina.
Fa kosa, mahaliana ny manamarika ny fifandraisan'ireo fanjohian-kevitra ary saika ny fianaran'ny sekoly rehetra no voamarina tamin'ity meta-analysis ity. Ny hany maningana dia ny fahaiza-manao arithmetika fototra amin'ny sokajin-taona 9-13 (haavo 11% nohazavaina) ary ny fahaizana mamaha olana matematika ao amin'ny sokajy 14-19 taona (11% variance nanazava).
Ity angon-drakitra ity dia mitaky taratry ny fampiasana andrana monocomponential toy ny Raven's Progressive Matrices (izay mbola ampiasaina matetika ankehitriny ho toy ny hany fitsapana kognitive amin'ny fanombanana diagnostika maro) izay mifantoka tanteraka amin'ny fisainana anaty rano fotsiny.
Ny fisian'ny fifandraisana malemy eo anelanelan'ny fahaizana mivelatra amin'ny maodely CHC sy ny fianarana any an-tsekoly, dia manome sosokevitra amin'ny fahamalinana amin'ny fandikana sy fanaovana vinavina mifototra amin'ireo tondro ireo (ohatra, amin'ny fahombiazan'ny akademika na amin'ny mety fisian'ny fahasembanana mianatra).
Raha fintinina, araka ny angon-drakitra amin'ity fikarohana ity, ny isa totalin'ny mizana arifomba multicomponential, dia ny IQ, dia toa ny data tokana mifamatotra mafy amin'ny zava-bitan'ny sekoly.
ADHD sy IQ. Inona avy no lafin-javatra misy fiantraikany amin'ny fampitana an-tsekoly?
Zaboski II, BA, Kranzler, JH, & Gage, NA (2018). Meta-famakafakana ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-bitan'ny akademika sy ny fahaiza-manaon'ny teoria Cattell-Horn-Carroll. Gazety psikolojia any an-tsekoly, 71, 42-56.
fahiratan-tsaina, faharanitan-tsaina sy fianarana, qi, IQ sy fianarana, IQ sy fianarana any an-tsekoly
Ny fiantraikan'ny IQ amin'ny fahombiazan'ny akademika: hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny sekoly2020-12-062021-01-01http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/qi-e-rendimento-scolastico2.png200px200px
ADHD amin'ny fanafiana fanampinyADHD, Lahatsoratra, Fampahalalana